Igbo - PM Proofreading
PM Nyochagharị bụ Global Proofreading and Editing Services Provider
PM Proofreading Services na-eduga ndị na-agụgharị ma na-edezi ọrụ na-eweta ọrụ e guzobere na 2012. Anyị na-enye ọrụ ndị anyị na-arụ ọrụ nyocha na ndị prọfesọ, ndị na-eme nchọpụta agụmakwụkwọ, ụmụ akwụkwọ postgraduate, akwụkwọ akụkọ, mahadum, ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na ọkwa ụwa. Ọrụ anyị nwere ntụkwasị obi nke ọma maka ntụkwasị obi, sistemụ arụmọrụ anyị nwere ntụkwasị obi na nzuzo maka udo nke uche zuru oke. Nzaghachi sitere na ndị ahịa mba ụwa na-alọghachi na-egosi aha ọma anyị maka ịdị mma, mgbanwe dị mma na ọnụego ezi uche.
Usoro nyochagharị anyị
Usoro anyi dizi gh’otara gh’onye (ngh ụta / ịda edemede, ụtọasụsụ, akara edemede) na idezi okwu (nhazi okwu, ngwangwa na mmezi, nkenke na ojiji doro anya nke asụsụ, okwu okwu na olu) Anyị na-ehichapụ ihe odide gị ma kwadebe ya maka mbipụta ma ọ bụ ibipụta. Anyị na-eso mgbanwe niile emere na ọrụ gị, ka ị nwee ike ịgabiga mgbanwe niile emere wee họrọ ma ị ga-anabata ma ọ bụ jụ mgbanwe ọ bụla. A na-ezitere gị ụdị nsụgharị mgbanwe abụọ na nsụgharị ikpeazụ dị ọcha nke ihe odide gị. Anyị na-agbakwunye nkọwa na ebe ị nwere ike ịme ka mma ederede gị. Onye nlere nyocha nke abụọ ga-eme nyocha ikpeazụ nke mmesi obi ike iji hụ na ezighara ederede ahụ na enweghị njehie.
Ndị na-agụ akwụkwọ anyị na Bekee
Ndị otu anyị nwere ndị ọkachamara n’okwu gbasara isiokwu, tozuru etozu na ọkwa Master na PhD site na mahadum kacha elu. Ọ bụla na-agụ akwụkwọ ọkachamara na otu ọzụzụ, ọ ga-edezi ihe odide n’etiti ha ọkachamara. N’ụzọ a, onye na – agụgharị ihe nwere ike idezi ihe odide ahụ nke ọma karịa ya, ebe ọ bụ na ọ maara okwu ndị bụ isi na mkpụrụ okwu pụrụ iche eji eme ihe na ya. Ndị na-agụ akwụkwọ si na ndụmọdụ niile dị.
Ha nwere ọtụtụ afọ nke nyochagharị ahụmịhe, ma nwee nka achọrọ iji jiri nlezianya gụgharịa ọrụ gị zuo oke, ma n’otu oge ahụ na-ejigide ma nzube ahụ na mmetụ onwe gị. Ndị otu anyị n’otu n’otu na-ahọrọ usoro mbanye na-ahọrọ nke ọma, ma na-agbaso usoro nyocha a maara nke ọma dịka nke ‘Chartered Institute of Editing and Proofreading’ (CIEP) jiri. Edepụtara ụfọdụ ndị otu anyị n’okpuru.
Mmekọrịta na Mahadum Globalwa
Anyị na ụmụ akwụkwọ postgraduate, ndị prọfesọ na ndị ọrụ agụmakwụkwọ sitere na Mahadum na mmekọrịta zuru ụwa ọnụ kemgbe 2012. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta anyị.